यस्ता काम बिहिवारको दिनमा भुलेर पनि गर्नुहुदैन !! | सुदुरपश्चिम खबर
यस्ता काम बिहिवारको दिनमा भुलेर पनि गर्नुहुदैन !!
चैत्र १९, २०७७
विहिवारको दिन भगवान विष्णुलाई अर्पित हुन्छ । हाम्रा पूर्वजहरूले सधैँ भन्ने गरेका छन् कि विहिवारको दिन हामीले केही काम गर्नुहुँदैन नत्र यसबाट हाम्रो नाश हुनसक्छ । ज्योतिषशास्त्र एक हिन्दु धर्मको यस्तो शास्त्र हो, जसमा मानिसलाई समान जीवन, दिनचर्या र भविष्यको बारेमा बताइएको छ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार, विहिवारको दिन यस्ता काम गर्नुहुँदैन, जसबाट तपाईको परिवारमा कुनै समस्या या तपाईलाई आर्थिक समस्यासँग जुध्नु पर्नेहुन्छ ।
खाने तेलको भाउ पुनः बढ्यो
विवाह , व्रतबन्ध , मलामीमा २५ जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने !!
ब्रह्माण्डमा स्थित नौ ग्रहहरू मध्य बृहस्पति को वजन सबैभन्दा भारी हुन्छ । यहि कारण हो कि यस दिन हरेक ती काम जसबाट शरीर या घरमा हल्कापन आउँछ । यस्तो अवस्थामा यस्ता कामहरू गर्नबाट मनाही गरिन्छ किनकी यसो गर्दा बृहस्पति ग्रह हल्का हुन्छ । बृहस्पति धर्म एवम् शिक्षाको कारक ग्रह हो । बृहस्पति ग्रहलाई कमजोर बनाउँदा शिक्षामा असफलता मिल्छ । साथै धार्मिक कार्यमा विश्वास कम हुँदैन जान्छ ।
१–नंग काट्ने र दाह्री खौरिने काम गर्नुहुँदैनःशास्त्रका अनुसार बृहस्पति ग्रहलाई एक जीव मानिएको छ । जसको अर्थ बृहस्पति ग्रहमा जीवन हुन्छ । यस दिन नंग काट्दा बृहस्पति ग्रह कमजोर हुन्छ । यसको कारण तपाईको बाँच्ने दिन कम हुनेगर्छ ।
२–महिलाहरूले कपाल धुनुहुँदैनःविहिवारको दिन महिलाहरूलाई कपाल धुनबाट मनाही गरिएको छ किनकी महिलाको कुण्डलीमा बृहस्पति पतिको कारक हुन्छ । यदि कोही महिलाले यस दिन कपाल धोएमा यसको पतिको उन्नतिमा सिधा असर पर्छ किनकी यस दिन कपाल धुँदा बृहस्पति कमजोर हुन्छ । यसै कारणले यस दिन महिलाले कपाल पनि काट्नु हुँदैन ।
३–घरमा पोछा लगाउनु हुँदैनःतपाईले यस दिन कहिलै पनि कपडा धुनु हुँदैन । यदि यस दिन तपाई आफ्नो घरमा पोछा लगाउने सोचिरहनु भएको छ भने यस्तो पनि गर्नुहुँदैन किनकी यसबाट बच्चाहरू, छोराहरू, घरको सदस्यहरूको शिक्षा, धर्म आदिमा शुभ प्रभावमा कमी आउँछ । अर्थात् उनीहरूको उन्नति रोकिन्छ ।
४–यस दिन लक्ष्मीलाई वेवास्ता गर्नुहुँदैनःहामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो कि विहिवार भगवान विष्णु जी को दिन हो । भगवान विष्णु जी को पत्नी माता लक्ष्मी हुन । अर्थात् विष्णु जी तब प्रसन्न हुनुहुन्छ जब तपाई उहाँको पत्नीको ख्याल राख्नुहुन्छ ।
५–घरमा लागेको जालो सफा गर्नुहुँदैनःघरको सरसफाई नगर्नुहोस् र साथै घरबाट माकुरोको जालो पनि सफा नगर्नुहोस् । ती कुनालाई सफा गर्नुहुँदैन, जसलाई दिनहुँ सफा गरिँदैन । यदि सम्पूर्ण कामलाई विहिवार गरिएमा धनको हानि हुन्छ । यो सबै उन्नति कम गर्ने संकेत हुने गर्दछ । (gnewsnepal बाट सभार)
सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, मास्क लगाएका यात्रु मात्र सवारी साधनमा चढ्न पाउने !!
खुशी खोज्दा खोज्दै हामी किन निराश र एक्लो हुनपुग्छौं ?
खजुर खादा शरीरलाई हुन्छन् यस्ता फाईदा ?
बैशाख ५, २०७८
भगवान शिवसँग सम्बन्धित आनौठा रहस्य– शिवशंकरको अर्थ के हो ?
गोदावरी नगरपालिकामा ९१ हजार बढीलाई हात्तीपाइले बिरुद्धको औषधी खुवाईने !!
सर्वोच्चले मानेन नेकपा ब्युताउन
पूर्वनिर्धारित परीक्षा नरोक्ने सरकारको निर्णय !!
विवाहमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने !!
चन्द्रागिरी हिल्सको वित्तीय विवरण सार्वजनिकः १८ करोड बढी नोक्सानी
विराटनगरमा एकैदिन २४ संक्रमित थपिए !!